မြန်မာပြည်အတွင်း | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ ဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
မြန်မာပြည်အတွင်း ရှိ မှ ဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ
For Mindon & Ngaphe, Saw & Sidoktaya
The main task is for supervision for Cafe Amazon Branch. Live in Myawaddy City and able to speak Thai language is preferable. Prefer to have experiences in F&B industry foraminimum period of3years.
The main task is for supervision for Cafe Amazon Branch. Live in Myawaddy City and able to sp ...
The main tasks are (Fronts, cashier, barista). Live in Myawaddy City and able to speak Thai lang ...
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ ဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။